10 Most Streets Beautiful In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Most Streets Beautiful In Europe
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 10/01/2020)
Europe azere mamwe Most Beautiful Streets. Kubva zvikuru kwezvokufuka uye mavara kune kujairika. Vamwe Most Beautiful Streets MuEurope vakatobatana yakawanikwa uye tsime yakasimbiswa pamusoro nzvimbo njanji asi vamwe zvechokwadi matombo anokosha akavanzwa kuti avo vari kuziva chete achakwanisa nomurindi kunosora kubuda. Takaisa pamwe yedu pamusoro pamazita!
1. Most Beautiful Street In Europe: Cremieux mumugwagwa, Paris, Furanzi
Pane chinhu pamusoro siyana dzimba uye sokunofadza, cobbled mumigwagwa Cremieux mumugwagwa kuti kuisa kamera kwako pasi hazviiti! Izvi Vakamupfekedza Parisian Mugwagwa wacho une pinks, hanyanisi, yellows uye mwoyo, chero ruvara anoenderana chero hembe kuti kwairayirwa Photo nhungirwa. Itai nokuti giremu, vakomana!
2. Via Toledo, Naples, Itari
Via Toledo chinhu yekare mumugwagwa uye mumwe chinhu chinokosha kunotenga thoroughfare muguta Naples, Itari. ichi 1.2 makiromita dzomumusha ndechimwe Most Beautiful Streets In Europe. Rinotanga pana Piazza Dante uye inoguma muna Piazza Trieste E Trento, pedyo Piazza del Plebiscito.
Kuvakwa mumugwagwa wakanga arayira achishandisa viceroy pakati Naples, Pedro Alvarez of Toledo, mu 1536. Via Toledo akazivikanwa senzvimbo migumisiro Grand Tour nzendo mugore rechi18 uye rechi19 emakore uye nemhaka Neapolitan nziyo, umo akanga ataurwa kakawanda.
Ivy akafukidza dzimba uye muchivande pamasitepisi. Kynance Mews muna Kensington ari nokure Most Beautiful Streets In Europe. In matsutso, mugwagwa glows pamwe manyoro uye burgundy mashizha, uye kana chitubu paanosvika, dzimba kurichinja kuva ruvara dondo. nzvimbo iyi London ndiye chero bloggers pfungwa kudenga!
4. Calleja of Las Flores, Cordoba, Speini
The Calleja of all Flores ndeimwe yenzvimbo nzvimbo mumigwagwa nevanhu pamusoro Cordoba muguta Andalusia, Speini. Ndokusaka zviri pamusoro yedu mazita Most Beautiful Streets In Europe. Papi sezvo mharadzano dzomumusha Velazquez Bosco, rakamanikana mugwagwa unoguma mune plaza.
Madziro chena vari mudungwe pamwe zvisingaverengeki, ichiitirwa emaruva vakazadzwa Geranium uye carnations, zvichipa mbiri Pop mavara ichi chikamu chinokosha zvechokwadi mutaundi. Pamwe yaro yakatetepa, cobbled uriri, ibwe archways uye Chokwadi wakanaka rusvingo yakarongedzwa, ari Mezquita Church ari maonero kubva pakati pamasvingo zvichiita kuti akakwana kuwedzera imwe mufananidzo kare akakwana.
Tucked kure zvishoma mativi pedyo Mupedzi Hill, uchawana imwe Most Beautiful Streets In Europe uyewo Wekumusoro Instagrammable! Fungidzira musara akanaka Wedding townhouses kuti mumire yakakwirira, curving akapoteredza diki, girini paka iri Chalcot Square. Zvinonzi dombo kurasa kubva Regents Park uye yakakurumbira Camden Market.
6. Rozenhoedkaai, kushandiswa, Bherujiyamu
Kana iwe airinda firimu, In Bruges pamwe Colin Farrell. Ipapo iwe uchaziva chaizvo zvatiri kutaura pamusoro. Zvichida ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru rine runyararo makwapa kuti Kadhi nguva! Rozenhoedkaai zvingava zvishoma mumugwagwa kufanana pane dzimwe nzvimbo dziri pasi rino, zvisinei, takafunga kuchiri yakakodzerwa rinokosha panotaurwa. Chero nguva gore, Rozenhoedkaai glows vashanyi ayo. Pane chinhu saka enchanting pamusoro fairytale akitekicha uye billowing muti kuti zvinenge dips kupinda Canal mvura.
Nakidzwa remba pasi Edinburgh cobbled Victoria Street vakazara mafaro, yakasiyana zvitoro, uye eateries. Victoria Street ndiye chigamba yakasimba pamusoro citys munhau pamwe rwawo rwematombo uye nokuchembera norunako kukwezva vashanyi kubva pamusoro. Iva nechokwadi uchifamba pasi Grassmarket iyo yakatanga muzana remakore rechi14 uye anotengesa zvemarudzi ose omunzvimbo zvibereko uye matomu tonotora.
8. Nyhavn, Copenhagen, Dhenimaki
Nyhavn nezvikwekwe bhokisi kuti ari mufananidzo wakakwana chengarava divi mumugwagwa kuti watsemuka vane ruvara, pamwe rine runyararo chikepe masts, zvemiti cafes uye classy maresitorendi lining mativi. Izvi guta anozvirumbidza Copenhagens quirky mhepo uye hipster vibe uyewo zvikuru wakajeka mumugwagwa muguta. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
9. Most Beautiful Street In Europe: Burano, Venice, Itari
A kufamba (kana chikepe tasva) pasi rino mugwagwa yakaisvonaka Venice kwakafanana nokutora tichiona muraraungu. Burano chitsuwa pakupikiswa Venetian the lagoon, asi kana uri nokusingaperi rombo zvakakwana kushanyira unenge ichitora kamera yako (Nharembozha) pakarepo. Dzimba yakaisvonaka Canal achimhanya akananga napo kuita saka enchanting. Ndiyo mhando nzvimbo kuti anogona kusimudza munhu manzwiro pakarepo.
10. East Side Gallery, Berlin, Jerimani
Tora remba pasi nyika yakakurumbira East Side Gallery. A mugwagwa ane chaiyo rakavhurika mhepo maberere wakanamira zvose pamwe chete zvakasara Wall Berlin. Pane Insta mikana Galore pasi mumugwagwa uyu sezvo mifananidzo haimbodaviriki, asi hunotova chilling chiyeuchidzo Berlin nhoroondo uye Hondo Yemashoko.
Wagadzirira kuenda uye kushanyira Most Beautiful Streets In Europe? Iva nechokwadi iwe bhuku Save A Train No yokuwedzera mari, hapana paine kupikisana kwakadaro, chete mafaro!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Most Beautiful Streets In Europe Yekudzidza” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europestreets europetravel longtrainjourneys prettystreets trainjourney nezvitima chitima mazano